Madaxweynaha Somaliya oo gaaray Magaalada Kismaayo – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wafdi uu hogaaminaayo, ayaa gaaray Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubadda hoose oo maalmahaan si weyn looga sugaayay.
Wafdiga Madaxweynaha oo ka ambabaxay Magaalada Jowhar ayaa lagu soo dhaweeyay Magaalada Kismaayo, waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay dhamaan Madaxdii ku sugneyd Magaalada Kismaayo.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Madaxweynaha Galmudug C/kariin Guuleed, Madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubbaland C/qaadir Lugadheere, kuwaasi oo ay iska raaceen Magaalada Jowhar.
Ammaanka Magaalada Kismaayo ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana amniga si wadajir ah u sugaayo Ciidanka Jubbaland iyo kuwa Amisom ee Magaalada jooga.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa loo galbiyay Xarunta Shirka Madasha Wadatashiga Qaran ee Magaalada Kismaayo, oo la filaayo in Madaxweynaha uu daah furo.